VAIA1000 ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်ကို တစ်နာရီတွင် ၁၀၀၀ လီတာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်နံပါတ် ၂၅၀၉၆၉ တရားဝင်လက်မှတ်ရရှိထားပါတယ်။
မော်ဒယ်- VAIA 1000
ကုနျပစ်စညျးရဲ့ ကုဒျနံပါတျ: VAIA1000
As the No. 1 water purification product in Vietnam, 1000LPH VAIA1000 Purified Water Filtration System has been and is the number 1 choice for water filtration and water treatment in homes, urban areas, schools, diseases. institutes, factories, and production and business establishments.
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာ ရေသန့်ပစ္စည်းတွေ ထုတ်လုပ်တာ နံပါတ် ၁ ဖြစ်တာနဲ့အညီ 1000LPH VAIA1000 ရေစစ်က အိမ်တွေ၊ မြို့နေရာတွေ၊ ကျောင်းတွေ၊ တက္ကသိုလ်တွေ၊ စက်ရုံတွေ၊ စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ အသုံးပြုတဲ့ နံပါတ် ၁ ပစ္စည်း ဖြစ်လာပါတယ်။
Made up ofasystem of components mainly imported from advanced countries such as the US, UK, Italy, Netherlands, Korea ... and assembled at Vietnam's largest factory in Viet An with an area of more than 10,000 square meters byateam of most skilled technicians in the industrial water purifier industry of Viet An Company. The entire production and assembly process ensures ISO 9001:2015 standards, so the automatic stainless steel valve filter column water filtration system is qualified for export to ASEAN countries.
US UK အီတလီ နယ်သာလန် ကိုရီးယား စတဲ့ ခေတ်မီတဲ့ နိုင်ငံတွေမှ တင်သွင်းသော အစိတ်အပိုင်းများဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး ဗီယက်နမ်မှာ အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ ၁၀၀၀၀ စတုရန်းမီတာရှိတဲ့ Viet An စက်ရုံမှာ ရေသန့်ကုမ္ပဏီတွင် အရည်အချင်းရှိတဲ့ နည်းပညာအဖွဲ့မှ တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ ထုတ်လုပ်တပ်ဆင်မှုတစ်ခုလုံးက ISO 9001:2015 စံချိန်မီပြီး စတိန်းလက်စ်စတီး အော်တို ရေစစ်က အာဆီယံနိုင်ငံတွေကို တင်ပို့ဖို့ အရည်အသွေး ပြည့်မီပါတယ်။
Designed inacompact industrial design, with ro membrane application to remove up to 99.9% of impurities, toxins, viruses, bacteria and water in the finished water is pure water with health benefits. People, so it is not strange that there are so many people on the market who want to own this genuine water purification product with capacity of 1000 liters / h.
သိပ်သည်းသော ဒီဇိုင်းရှိပြီး ၉၉%သော အညစ်အကြေး အဆိပ်အတောက် ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်တဲ့ RO အလွှာပါး ပါရှိတာကြောင့် စစ်ထုတ်ပြီးတဲ့ ရေတွေက ကျန်းမာရေးအတွက် အထူးသင့်တော်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဈေးကွက်က အရည်အသွေးပြည့်မီပြီး စစ်မှန်သော တစ်နာရီမှာ ၁၀၀၀ လီတာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ ဒီစက်ကို လိုချင်သူ များပြားနေတာပဲ ဖြစ်တယ်။
Let's join Vietnam An General Trading Joint Stock Company to learn more about 1000LPH VAIA1000 Purified Water Filtration System to see why so many people trust and choose to use them like that.
1000LPH VAIA1000 စက်ကို ဘာကြောင့် လူတွေအများကြီး ရွေးချယ်ကြလဲဆိုတာ သိရှိဖို့ Viet An ကုမ္ပဏီနဲ့ လက်တွဲကြည့်လိုက်ပါ။
Advantages of 1000LPH VAIA1000 Purified Water Filtration System
1000LPH VAIA1000 ရေစစ်ရဲ့ ကောင်းကျိုးများ
Applying the most advanced RO water purification technology in 2018, both filtering out pure water to meet the standards of QCVN 6-1:2010/BYT of the Ministry of Health, US FDA standards and ensuring that the minerals are retained. Essential substances for the body should be water quality
၂၀၁၈ ခုနှစ်ရဲ့ ခေတ်ရှေ့အပြေးဆုံး RO ရေသန့် နည်းပညာကို အသုံးပြုထားတာကြောင့် ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဋ္ဌာနရဲ့ QCVN 6-1:2010/BYT စည်းမျဉ်းနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့အပြင် US ရဲ့ FDA လက်မှတ်လည်း ရရှိထားပါတယ်။
Fast filtration, 1000 liters of pure water per hour withacompletely self-contained, automatic filtration process. The whole water treatment process does not need the participation of humans.
တစ်နာရီမှာ ၁၀၀၀ လီတာ စစ်ထုတ်နိုင်ပြီး ကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ်ကာ အော်တိုလုပ်ဆောင်ပါတယ်။ ရေပြုပြင်နေတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးမှာ လူတွေရဲ့လုပ်အား မလိုအပ်ပါဘူး။
Can handle many types of dirty water, water that does not meet the standards into pure water
ညစ်ညမ်းတဲ့ ရေမျိုးစုံကို ကိုင်တွယ်နိုင်ပြီး ရေသန့်အဖြစ် ပြောင်းလဲပေးပါတယ်။
Compact industrial design does not take up space, easy to transport and install
သ်ိပ်သည်းတဲ့ ဒီဇိုင်းကြောင့် နေရာလည်း အများကြီးမလိုအပ်သလို သယ်ယူ တပ်ဆင်ရလည်း လွယ်ပါတယ်။
Imported genuine components system with high durability.
အစိတ်အပိုင်းတွေက ကြာရှည်ခံပြီး စစ်မှန်ပါတယ်။
The system uses high-quality 304 stainless steel filter column, has high durability, is easy to clean and is absolutely safe.
အရည်အသွေးမြင့် 304 စတိန်းလက်စ်စတီး ရေစစ်ကော်လမ်ကို အသုံးပြုထားတာကြောင့် ကြာရှည်ခံပြီး သန့်ရှင်းရလွယ်ကူကာ လုံခြုံစိတ်ချရပါတယ်။
Compact and lightweight design makes it easy to transport and install
သိပ်သည်းပြီး ပေါ့ပါးသော ဒီဇိုင်းကြောင့် သယ်ယူပို့ဆောင် တပ်ဆင်ရ လွယ်ကူပါတယ်။
Applying technology to save power to the maximum, thus helping to savealot of electricity consumption costs
ပါဝါကို ချွေတာတဲ့ နည်းပညာ အသုံးပြုထားတာကြောင့် မီတာခလည်း သက်သာပါတယ်။
The automatic valve system is capable of self-adjusting the filter column, self-cleaning the filter column to help the water filtration process take place completely automatically, saving labor costs.
အော်တိုအဆို့စနစ်က ရေစစ်ကော်လံကို ကိုယ်တိုင်ညှိနိုင်၊ သန့်ရှင်းနိုင်တာကြောင့် ရေစစ်ခြင်း လုပ်ငန်းကို အပြည့်အဝ အော်တိုလုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး အလုပ်သမားစရိတ် သက်သာစေပါတယ်။
1000LPH VAIA1000 Purified Water Filtration System by Viet An - your perfect choice
Viet An မှ 1000LPH VAIA1000 ရေစစ်- သင့်ရဲ့ အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်မှု
One of the products specializing in modern industrial water purification, RO water filter technology application uses RO membrane filter - the best water filter today to filter out pure water. RO membranes are polyamide (PA) thin sheets that are widely used and popular in water treatment techniques for artificial kidneys. This RO filter is made from very thin semi-permeable PA membranes and tightly wound aroundahighly permeable collector. The coil design increases the surface area in contact with water and reduces the size of the filter.
ခေတ်မီစက်ရုံတွေမှာ အသုံးပြုတဲ့ RO ရေစစ်နည်းပညာက ရေသန့်ကို ထုတ်လုပ်ဖို့ အကောင်းဆုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ RO အလွှာပါးတွေက ရေပြုပြင်တဲ့ နည်းပညာတွေမှာ သုံးတဲ့ ပိုလီရာမိုက်ထ် သေးလွှာသော အရွက်လေးတွေပဲ ဖြစ်တယ်။ RO ရေစစ်ကို တဝက်စိမ့်ဝင်နိုင်တဲ့ PA အလွှာတွေကနေ ပြုလုပ်ထားပြီး စိမ့်ဝင်နိုင်သော စုဆောင်းသူနားမှာ တင်းကြပ်စွာနေပါတယ်။ ကွိုင်ရဲ့ ဒီဇိုင်းက ရေနဲ့ ထိတွေ့တဲ့ မျက်နှာပြင်ကို တိုးစေပြီး ရေစစ်ရဲ့ အရွယ်ကို လျှော့ချပေးပါတယ်။
RO membrane is fabricated according to the reverse osmosis principle - water flows from low mineral concentration to high concentration through semi permeable membrane to become equilibrium. The filter eye size of the RO membrane is only 0.0001 micronmet, this size is the smallest size of all types of filters on the market today. That is why they allow water molecules to pass through and retain all impurities, toxins, micro-rust, bacteria and push them out through the sewage line. A special self-cleaning mechanism is available only in RO membranes and not in other water filters.
RO အလွှာကို ပြောင်းပြန် အိုစမိုးစစ်နည်းအတိုင်း ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။(ရေက ပျော်ဝင်မှုနည်းရာမှ များရာသို့ ဟန်ချက်ညီဖို့ တဝက်စိမ့်ဝင်နိုင်တဲ့ အလွှာကိုဖြတ်ပြီး စီးဆင်းပါတယ်။) RO အလွှာက အရွယ်အစားက ၀.၀၀၀၁ မိုက်ခရိုမီတာသာရှိပြီး ဈေးကွက်က အခြားရေစစ်တွေထက် သေးပါတယ်။ ဒါက ရေမော်လီကျူးတွေကို ဖြတ်စေပြီး အညစ်အကြေး အဆိပ်အတောက် သံချေး ဘက်တီးရီးယားတွေကို စွန့်ထုတ်လိုင်းဆီသို့ တွန်းပို့ပေးတဲ့ အကြောင်းပြချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စပါယ်ရှယ် ကိုယ်တိုင်ဆေးကြောတဲ့ စက်ကို RO အလွှာပါးမှာသာ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
The principle of reverse osmosis water filtration differs from conventional filtration principles, water withahigh mineral concentration is forcibly pumped throughasemi-permeable membrane and therefore insoluble substances (salts, metallic substances) types,….) are discharged via wastewater and purified RO water is generated.
ပြောင်းပြန် အိုစမိုးစစ် စည်းမျဉ်းက သမားရိုးကျ စည်းမျဉ်းနဲ့ ကွဲပြားပါတယ်။ ပျော်ဝင်မှုများတဲ့ ရေကို တဝက်စိမ့်ဝင်နိုင်တဲ့ အလွှာဆီကို စုပ်တင်ပေးပါမယ်။ အဲ့ဒီ့အခါ ဆားလို မပျော်ဝင်နိုင်တဲ့ အရာဝတ္ထုတွေက စွန့်ပစ်ရေတွေ ဖြစ်သွားပြီး ရေသန့်ကို ရရှိမှာ ဖြစ်တယ်။
Specifications of 1000LPH VAIA1000 Purified Water Filtration System
1000LPH VAIA1000 ရေစစ်၏ ဖော်ပြချက်များ
Product's name: 1000LPH VAIA1000 Purified Water Filtration System
Capacity: 1000 liters / h
Size: 4x0.6x1.5 m
Power consumption: 1.84 Kw / h
ကုန်ပစ္စည်းအမည်- 1000LPH VAIA 1000 ရေစစ်
လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း- တစ်နာရီတွင် ၁၀၀၀ လီတာ
အရွယ်အစား- ၄×၀.၆×၁.၅ မီတာ
ပါဝါစားခြင်း- တစ်နာရီတွင် ၁.၈၄ ကီလိုဝပ်
ပါဝါပေးပို့မှု-၂၂၀ ဗို့ ၊ ၃၈၀ ဗို့
Warranty and maintenance policy when you buy 1000LPH VAIA1000 Purified Water Filtration System autovan stainless steel filter column in Viet An
Viet An တွင် 1000LPH VAIA 1000 ရေစစ်ကို ဝယ်ယူသည့်အခါ ရရှိမည့် အာမခံချက်နှင့် ထိန်းသိမ်းမှု
When you choose to buy pure water production system withacapacity of 1000 liters of Viet An, you will enjoyaspecial warranty policy.
Viet An ရဲ့ ၁၀၀၀ လီတာ လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ ဒီစက်ကို ဝယ်ယူတဲ့အခါ စပါယ်ရှယ် အာမခံချက် ပေါ်လစီကို ခံစားရမှာပါ။
12-month warranty for customers who purchase 1000LPH VAIA1000 Purified Water Filtration System
1000LPH VAIA1000 ရေစစ်ကို ဝယ်ယူတဲ့အခါ ၁၂ လ အာမခံချက် ရရှိပါတယ်။
Besides, Viet An also offers customersapreferential gold package, free shipping nationwide, worth up to VND5million.
ဒါ့အပြင် Viet An မှ ရွှေပတ်ကေ့ခ်ျအဖြစ် နိုင်ငံအနှံ့ ဗီယက်နမ်ငွေ ၅ သန်းတန်တဲ့ ပို့ဆောင်မှု အခမဲ့ပေးပါတယ်။
Viet An offers customersaspecial package of 10-15% when buying next Viet An products
Viet An မှ ဝယ်ယူသူတွေကို နောက်ထပ်ပစ္စည်းတွေ ထပ်ဝယ်တဲ့အခါ ၁၀-၁၅% စပါယ်ရှယ် ပက်ကေ့ခ်ျပေးပါတယ်။
Offering customersa5-10% discount when replacing filter materials in Viet An
Viet An တွင် ရေစစ်ပစ္စည်းတွေ လဲတဲ့အခါ ၅-၁၀% ဒစ်စကောင့် ပေးပါတယ်။
Over nearly 20 years of construction and growth, always making endless efforts to meet all the needs of customers. Whether you are in any province of the country that needs to use industrial water purification systems with full capacity, please contact Viet An at 0949 414141 for the best service.
နှစ် ၂၀ နီးပါး တိုးတက်လာမှုနဲ့အတူ ဝယ်ယူသူတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ အမြဲကြိုးစားနေပါတယ်။ သင်က ဘယ်ဒေသကပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒီစက်ကို လိုချင်တယ်ဆိုရင် အကောင်းဆုံး ဝန်ဆောင်မှုရဖို့ ၀၉-၄၉ ၄၁ ၄၁ ၄၁ ကို ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
Once you have decided to choose this VAIA1000 Purified water filtration system, you can study to investasynthetic filling system made of stainless steel to fill 35-60 jars/h (20L jar) and 150 bottles/hour (500ml bottle) withacompetitive price from just ... USD.
2 Air disinfection lamp လေပိုးသတ်မီးအိမ်2unit VA/ USApec
3 Air disinfection lamp hanger လေပိုးသတ်မီးအိမ်ရုံ2unit VA/ USApec
14 20” PP Filter Cartridge ၂၀ စစ်ထုတ်ကိရိယာတောင့်3unit VA/ USApec
15 Industrial filter housing စက်ရုံသုံး စစ်ထုတ်ကိရိယာအိမ် 1 unit VA/ USApec
17 Membrane housing အလွှာပါးအိမ်3unit VA/ USApec
18 RO membrane RO အလွှာပါ3းunit Hitech-USA/CSM Korea
19 Flowmeter စီးဆင်းသောမီတာ2unit Taiwan
20 Pressure gauge ဖိအားတိုင်းတာကိရိယာ3unit Taiwan
22 Solenoid valve သံလိုက်အစို့ 1 unit Cn Korea
25 UV lamp UV မီးအိမ် 1 unit Poland/ Hungary/ USA
26 Ozone machine အိုဇုမ်းစက် 1 unit VA/ USApec
27 20” stainless steel filter housing စစ်ထုတ်ကိရိယာအိမ် 1 unit VA/ USApec
28 Bacterial filter Cartridge ဘက်တီးရီးယားစစ်ထုတ်ကိရိယာတောင့် 1 unit VA/ USApec
Hỏi đáp & đánh giá 1000LPH VAIA1000 ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်